အိမ်ထောင်ပြုရန် အရည်ချင်း ပြည့်မပြည့် - YOYARLAY Digital Media and News
သား – အဖေရေ ကျွန်တော့ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်။
အဖေ – ငါ့ကို ဆောရီးပါ၊ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ပြော
သား – အဖေ့ကို ကျွန်တော့ ဘာအမှားလုပ်လို့ တောင်းပန်ရမှာလဲ
အဖေ – ငါ့ကို ဆောရီးပါလို့ ပြောစမ်းပါ
သား – ဘာလို့လဲ အဖေရ
အဖေ – ပြောသာပြော
သား – အကြောင်းပြချက်လေးတော့ ကျွန်တော်သိသင့်တယ် ထင်တယ် အဖေ
အဖေ- ငါ့ကို အခုတောင်းပန် မလား မတောင်းပန်ဘူးလား
သား – တောင်းပန်တယ် အဖေ … ဆောရီး
အဖေ – အေး. ဒါမှ ငါးသား။ မင်း လေ့ကျင့်မှုအောင်မြင်ပြီ။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် ရှိရမယ့် အရည်အချင်း တစ်ခု မင်းဆီမှာရှိသွားပြီ။
သား – အွန်. အဲ့ဒါဘာလဲဗျ။
အဖေ – အကြောင်းပြချက် မရှိပဲ တောင်းပန်ရတဲ့ အလုပ်
Previous Previous post: ခရမ်းချဉ်သီး စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၉ ချက်
Next Next post: လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ လူငယ်တွေရဲ့ Idea တွေကို ငွေနဲ့ ဝယ်နေတာလား
ကျောင်းပြီးလို့ အခုမှ လုပ်ငန်းခွင်ကို စတင်ခြေချချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မပျော်ပိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်နေရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်သစ်တစ်ခုကို ရှာဖို့ရ စိတ်ကူးရှိကြမှာပါ။ ခုခေတ်မှာ အလုပ်တွေပေါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျစေတဲ့အလုပ်ကို ရှာရတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုကျော်မလဲ ဆိုရင်တော့ Post…
Published: May 5, 20179:26 am
Published: May 2, 20192:42 pm Updated: May 4, 20194:15 pm